दिपेन्द्र धिमाल अर्थात डाइभरको कांग्रेस नगरसभापतिमा चर्चा – Purbicommand
दिपेन्द्र धिमाल अर्थात डाइभरको कांग्रेस नगरसभापतिमा चर्चा
२०७७ भाद्र ४, बिहीबार ०५:०४ गते
उर्लाबारी । दिपेन्द्र धिमाल (डाइभर) खेलकुद क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम होइन । लामो समयदेखि फुटबल क्षेत्रको विकासमा समर्पित रहनु भएका धिमाल तेस्रो कार्यकाल मोरङ जिल्ला फुटबल संघको अध्यक्ष भएर काम गरिरहनु भएको छ । धिमालले फुटबल खेल्दा बललाई छक्याउने शैली ‘डाइभर’जस्तै भएकाले उहाँको नाम ‘डाइभर’ रहन पुगेको थियो ।
फुटबल क्षेत्रको विकासमा लामो समयदेखि योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका धिमाल आसन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा उर्लाबारी नगरसभापति पदमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा जुट्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. १ का वरिष्ठ सदस्यसमेत रहनु भएका धिमालले एक कार्यकाल उर्लाबारी नगर विकास समितिको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा रहेर राजनीति गरिसकेका धिमाल अब नेतृत्वमा आएर नेपाली कांग्रेसलाई थप चलयमान बनाउने इच्छा रहेको बताउने गर्नुभएको छ ।
आफूले यसअघि पार्टीमा कुनै पनि पदमा दाबी नगरेकाले यसपटक सबैको साथ र सहयोग पाउनेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ । पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक धिमाल समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ सबैका लागि प्रिय देखिनु हुन्छ । आधा दर्जन बढीले उर्लाबारी सभापतिमा दाबी गरिरहँदा उहाँ सबैभन्दा बढी प्रभावशाली रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।
यी १० नेता कस्को पढाई कति ? हेर्नुहोस् एक भिडियो रिपोर्ट
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक स्थगित
कार्यदलको सुझावबारे ओली–प्रचण्डको छलफल बालुवाटारमा
कांग्रेस उर्लाबारी सभापतिमा शाक्यले उम्मेद्वारी दिने
कांग्रेसको महाधिवेशन छ महिना पर सार्ने तयारी, कोरोनाका कारण प्रभावित